बाह्रखरी उत्कृष्ट कथा वीर्य
बेरोजगारीको पीडा सहन नसकेर नवीन बिदेसियो । नवीना गाउँ जान मानिन । सहरमै बसेर केही गर्छु भनी । उसले सहरमा जेनतेन जिन्दगी त चलाई । तर खासै ठूलो उपलब्धि हात पार्न सकिन । उता नवीनले पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेन । आफ्नो कमाइ बाँडचुँड गरेर ऊ सक्थ्यो । अलिकति नवीनाका भागमा पथ्र्याे । अलिकति घरमा बाआमाका भागमा र बाँकी रहेको रकम आफैंले खर्च गरेर सक्थ्यो । विदेशको बसाइ, वैधानिकताका नाममा नै उसले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्यो ।
भौगोलिक दूरीले माया घट्दैन रहेछ । प्रविधिले नवीन र नवीनालाई आपसमा बाँधिरहेकै थियो । उनीहरू दिनहुँ घण्टौं कुरा गरिरहन्थे ।
नवीन विदेशमै भएका क्षण नवीनाले छोरो पाई । नवीनले बधाई दियो । तर धेरैले कुरा काटे । रमिला नवीनाकै अफिसमा काम गर्छे । उसले भनी, “यो बाबु त ठ्याक्कै उसको बाबा जस्तै छ ।” उसले रमेशलाई त्यो बालकको बाबा सम्झिई । रमेश नवीनाको काकाको छोरो हो । उसले कहिलेकाहीँ नवीनालाई मोटरसाइकलमा राखेर अफिस पु¥याइदिने गथ्र्यो । रमिलाले यो सम्बन्ध थाहा पाएकै थिइन । उसले नवीनका बारेमा केही जानेकै थिइन । नवीनलाई देखेकी पनि थिइन ।
घरमा देवरले पनि कुरा काटे, “कसको पाप जन्माई त्यसले ? दाजु चाहिँ आफ्नै सन्तान भन्छ रे । विदेश गएको १० वर्षपछि यहाँ छोरो जन्मियो । शङ्का लागे जति सबैको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्छ ।”
नवीन र नवीनाले शारीरिकभन्दा हार्दिक सुखलाई महत्व दिएका थिए । उनीहरूको बुझाइ थियो, “आज हामी टाढियौं । अर्कैसँग नजिकिएका छौं । भोलि अर्कैसँग नजिकिनुपर्ला । के जोसँग नजिकियो, उसैसँग शारीरिक सम्पर्क गर्ने ? कि कुण्ठा पालेर बस्ने ? यसै हो भने आजका उच्च बौद्धिक र वैज्ञानिक युगका हामी र हिजो जङ्गली युगका हाम्रा पुर्खामा के भिन्नता ? त्यसैले विज्ञानको उपयोग गरौं । विज्ञान वरदान हो ।” उनीहरूले शारीरिक सन्तुष्टिका लागि खेलौनाहरू प्रयोग गर्ने गरेका थिए । त्यसैले उनीहरूको तन र मन पवित्र मात्र होइन, अनेकौं सङ्क्रमणको चुनौतीबाट सुरक्षित पनि थियो । यो कुरा नवीन र नवीनाबाहेक कसैलाई थाहा थिएन । यिनीहरूका अरू धेरै कुरा कसैलाई थाहा थिएन । समुद्र देख्ने जोसुकैले समुद्रको गहिराइ नाप्न सक्दैन । नवीन र नवीनाको माया र विश्वास समुद्र झैं गहिरो थियो ।
ससुरा रिसले मुर्मुरिएछन् । सासू गाउँभरि कुरा काटेर हिँड्न थालिन् । नन्द, आमाजूको दिनचर्या नै कुरा काट्ने भयो । माइतीले परपरै चासो गरे । तर केही सोध्न सकेका थिएनन् । रमेशका आँखामा पनि शङ्काको भाव पोतिएको थियो ।
पहिलेपहिले त नवीनाले चुपचाप सहेर बिताइदिई । आखिर केही नलागेर उसले एउटा स्टाटस लेखी, “सीतालाई रामले सती ठानेपछि अनेकौं रावणहरू राम बन्न खोज्दा रहेछन्; सीताको अग्निपरीक्षा गर्नलाई ।”
यसले कुरा काट्नेहरूलाई झस्कायो । नवीनले घरमा वातावरण मिलायो । घरबाट नवीना बोलाइयो । भोलि त्यस नवजात शिशुलाई गृहप्रवेश गराउँदै छे, नवीना । त्यो बालक सहरको डेराबाट आफ्नो पुख्र्यौली घरमा भोलि भित्रिँदै छ । बिहान झिसमिसेमै उसको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ । सायद यसैले ऊ अहिले साँझमै निदाइसकेको छ । नवीना आफ्नो यही दुईमहिने सन्तानका छेउमा बसेर ल्यापटपमा आँखा दौडाइरहेकी छे । नवीनाले सामाजिक सञ्जालमा नवीनसँग भएका पुराना संवाद हेरी अनि अनेकौं तीतामीठा क्षण सम्झिई ।
नवीन : प्रिया ! अब तिमीले मलाई बिर्सिन्छ्यौ क्यार । तिम्रा सबै चाहना र आवश्यकता मेरा अनुपस्थितिमा नै पूरा भए । अब मसँग तिमीलाई दिने के नै छ र ?
नवीना : त्यसो नभन प्रिय ! ...हो, मैले धेरै पाएँ । जे पाएँ तिम्रै असीम अनुकम्पाले पाएँ । तिमी टाढा भए पनि हरदम मलाई ख्याल गरिरहन्छौ । मेरा सम्पूर्ण इच्छा तिमीले नै पूरा गरिदियौ । साँच्चै त्यो पछिल्लो खेलौनाले त म तिमीलाई भुलुँला कि भन्ने भएको थियो । धेरै हदसम्म त्यसले तिम्रो अभाव कम गरिदिएको थियो । त्यसले मलाई तिम्रै जस्तो न्यानो अँगालो दिन्छ । मीठो र सुमधुर स्पर्श दिन्छ । भित्री हृदय नै झङ्कृत हुने गरी मीठो कम्पन दिन्छ । तिमी जस्तै मसँग जिस्कन्छ र खेल्छ । ऊ खेल्दै जान्छ; मलाई खेलाउँदै जान्छ । म तात्दै जान्छु; सायद अलिअलि मात्तै जान्छु । होस गुम्नै लागेको हुन्छ; अर्कै संसारको चरम सुखमा पुग्नै लागेकी हुन्छु । शरीरभर चिटचिटाहट हुन्छ । म असिनपसिन भएकी हुन्छु । ठीक त्यसैबेला भित्र अन्तर्हृदयलाई पगाल्ने तातो, चिप्लो र बाक्लो पानीले मेरो भित्री शरीरसम्म स्पर्श गर्दा त्यसैत्यसै लुलिन्छु म । उसलाई अँठ्याएका मेरा हात लुलिन्छन् । ऊ त्यहीँ छेउमा कता पल्टन्छ । म तिम्रै मीठो यादमा सिङ्गो रात सर्लक्कै निलिदिन्छु । साँच्चै त्यस खेलौनाले मलाई यति धेरै सुख दियो । तिमीलाई विस्थापित गरिदेला नै जस्तो लागेको थियो । तर सकेन । त्यसले मलाई खै के हो के अर्कै कुरा दिन सकेन । मेरा मनले खै के माग्छ माग्छ । त्यो त त्यसले दिनै सकेन । त्यो अमूर्त कुरा, जुन तिमीबाट मैले पाउँछु; संसारका कुनै यन्त्रले मलाई दिन सक्दैन; कुनै खेलौनाले दिन सक्दैन । त्यो असीम आनन्द र स्नेह केवल तिम्रो सान्निध्यले दिन्छ । त्यसकै प्रतीक्षामा मेरा मुटुका प्रत्येक धड्कन धड्किरहेका छन् । केवल तिमी आउने आशामा !
नवीना भावविभोर भई । भित्तामा अडेस लागेर आँखा चिम्लिई । ल्यापटप काखमै थियो । केही बेरपछि उसका आँखाले स्क्रिन नियाले । ऊ अरू नै तर पुराना संवादको खोजीमा लागी ।
नवीना : प्रिय ! आज म तिमीसँग केही माग्न चाहन्छु । तिमी जसरी भए पनि देऊ है । नाइँ नभन है ।
नवीन : भन प्रिया ! आज तिमीले जे मागे पनि दिन म तयार छु ।
नवीना : त्यो तिमीले आफैं जानेर दिनुपर्ने कुरा हो । म कसरी भनूँ !
नवीन : तिमीले के माग्न खोजेकी हौ, त्यो कसरी म बुझूँ ?
नवीना : उसो भए तिमी मलाई माया गर्दैनौ कि ? उस बेला त भन्थ्यौ, “प्रिया ! तिमी वर्षात्मा रूझेर रोइरहँदा तिम्रा आँसु र पानी छुट्याउन सक्ने सामथ्र्य ममा छ । खै आज तिमी मेरो मनोकाङ्क्षा नबुझ्ने ? (ठुस्स परेको स्टिकर टाँसिएको छ ।
नवीन : त्यसो होइन प्रिया ! तिमीले नभनेका कुरा पनि म बुझ्छु । तिमीले भन्न आँटेका कुरा पनि बुझ्छु । तर... के भने नि, केहीकेही कुरा तिमीले मुख खोलेरै मागेको प्रिय लाग्छ मलाई त । हाहाहा ।
नवीना : नकच्चरा ! कत्ति जिस्क्याउन जानेको !
नवीन : अब तिमीसँग नजिस्के कोसँग जिस्कूँ त म ? हाहाहा ।
नवीना : भो धेरै ठट्टा नगर । भन त मलाई दिने कि नाइँ ?
नवीन : प्रिया ! म वाचाबद्ध छु । आज संसारको जुनसुकै खुसी तिमीले मागे पनि म दिन तयार छु । ...तर त्यो के हो, एक पटक मात्र भनिदेऊ न ।
नवीना : कुरो के भने नि...। छ्या मलाई लाज लाग्छ । आफैं बुझ न अब त ।
नवीन : कसरी बुझूँ आफैं ? फेरि मलाई तिमी लजाएको असाध्यै मनपर्छ के । कस्सम ! लजाउँदा तिमी बादलको हलुका घुम्टो ओढेको चन्द्रमा झैं सुन्दर देखिन्छ्यौ । लजाइलजाई मुखै खोलेर भन न प्रिया ! आज तिमीलाई म के दिऊँ ?
लेखेर गरिरहेको कुराकानी चटक्कै छाडेर नवीनाले नवीनलाई भिडियो कल गरी । उनीहरू स्क्रिनमा एकअर्कालाई हेर्दै कहिले मुस्कुराउँदै, कहिले ठुस्स पर्दै कुरा गर्न थाले ।
नवीन : च्याट छाडेर कलै ग¥यौ त, प्रिया ! किन ? के भन्न आँट्यौ ? ल्यापटपको स्क्रिनमा नवीन मुस्कुरायो ।
नवीना : तिमीले मलाई “मुखै खोलेर भन भन भन” भनेको होइन त ? सुन, अब म मुखै खोलेर भन्छु ।
नवीन : भनिहाल न । ढुकढुकी बढिरहेको छ । के माग्न खोजेकी हौ, तिमीले ?
नवीना लजाई । अलिकति नखराएको भावमा मुख छोपी । खित्त हाँसी र भनी, “वीर्य !” ओठ टोकेर ऊ अर्कातिर फर्किई । अलि सानो तर भित्रैदेखि निस्किएको आवाजमा भनी, “वीर्य माग्छु म; तिम्रो वीर्य ।
नवीन टोलाइरह्यो । उसको अनुहारमा अर्कै ज्योति देखियो । खुसी खुसी भए झैं । तर त्यो खुसी छताछुल्ल भएर पोखिएन । अनुहारकै आभा बनेर चम्किरह्यो ।
“आमा बन्न चाहन्छु म, तिम्रो सन्तानाकी आमा,” अलि दह्रो भएर नवीनाले भनी ।
धेरै बेर उनीहरू एकले अर्कालाई हेरेर टोलाइरहे । कोही केही बोलेनन् ।
धेरै दिन पर्खनुपरेन । नवीनले नवीनालाई केही दिनपछि प्रत्युत्तर पठायो । उसले लेखेको थियो, “तिमी तयार छ्यौ, प्रिया ! म तिमीलाई वीर्यदान गर्न आतुर छु । तर यो काम अर्धकानुनी हुनेछ ।”
ती दिन नवीनाले सकसमा बिताई । पहिलो कुरा त उसलाई खानामा अरूचि भयो । बल गरेर खायो; वाक्क आउँथ्यो । खाएको भन्दा बढी ह्वाल्ल जान्थ्यो । नातागतले सताउँथ्यो । भनन्न रिँगाटा लाग्थ्यो । त्यस बेला ऊ नवीनलाई असाध्यै सम्झन्थी, ऊ भइदिएको भए टाउको समाएर मलाई ढाडस दिन्थ्यो । सँगसँगै अस्पताल जान्थ्यौं । पहिलो चोटि डक्टरले “बधाई छ, तपाईं बुबा बन्ने हुनुभयो” भन्दा ऊ कति खुसी हुन्थ्यो । बरा ! अहिले पनि ऊ खुसी त भयो होला । तर मैले उसको खुसी नियाल्न पाइनँ । ऊ नवीनलाई सम्झेर घण्टौंसम्म टोलाइरहन्थी ।
दोस्रो, नवीनले भनेको ‘अर्धकानुनी’ कुराले उसलाई धेरै दिनसम्म पिरोल्यो । आखिर यो पिरोलो नवीनले नै सुल्झाइदियो । उसले भन्यो, “गाइनो डक्टरको सहयोगमा मेरो वीर्य तिमीले ग्रहण गर्नु वैधानिक कार्य हो । तर म यहाँ, तिमी त्यहाँ । म त्यहाँ आउने सम्भावना अहिले नै देखिन्न । म आउन्जेल हाम्रो उमेर ढल्किसक्ला । तिमी सन्तान जन्माउन समर्थ नरहुली । मैले यहाँबाट वीर्य पठाउने कानुनी प्रावधान छैन । त्यसैले सेटिङ मिलाएर पठाउन लागेको हुँ । सितिमिति यो कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । हामीमै सीमित रहन्छ ।”
तेस्रो र गम्भीर उसको मानसिक बेचैनी थियो । मानसिक हुरीले उडाएर उसलाई कहाँकहाँ पुर्याइदिन्थ्यो । ऊ धेरै समय टोलाउँथी, सुस्ताउँथी अनि आफैंलाई अनेकौं प्रश्न गरिरहन्थी । ‘किन मैले यसो गरें ? यसो नगरेको भए हुँदैनथ्यो ? के यो गर्न हुने काम हो ? के मैले सन्तान जन्माउनैपर्छ भन्ने केही छ ? नवीन किन परदेसिएको ? के यो धर्ती नवीनका लागि उजाड छ ? म किन नवीनसँग नगएकी, उसले मलाई कैयौं पटक बोलाएकै थियो । के ममा भएको राष्ट्रवाद फोस्रो हो । मलाई मेरो घर, समाज र राष्ट्रको माया लाग्यो । यिनै कारणले म देश छाडेर नवीनसँग निजी स्वार्थका पछि दौडन सकिनँ । के यो पाप हो ? कालान्तरमा उसलाई यही देशमा फिर्ता बोलाउने मेरो सपना ढुङ्गाका अक्षर झैं मेरा हृदयमा कुँदेर राख्नु के मेरो भ्रम हो... ।
नवीनाका आँखा स्क्रिनमा भएको अर्को संवादमा पुगे ।
नवीन : प्रिया ! म तिम्रो माग पूरा त गरूँला । तर अलि रिस्क छ है ।
नवीना : के रिस्क ?
नवीन : तिमीले मान्छे पाउने हौ कि बोको, बाख्रो, गोरू वा गाई । हाहाहा ।
नवीना : के भनेको त्यस्तो ? किन मजाक गरेको ?
नवीन : के भने नि... मेरो एउटा साथी पशुवीर्य सप्लाई गर्ने कम्पनीमा काम गर्छ । उसले त्यहाँ पनि सेटिङ मिलाएको छ । म उसकै सहयोगमा वीर्य पठाउँछु ।
नवीना : अनि के भो त ?
नवीन : मजाक मात्र गरेको ।
नवीना : के मजाक ?
नवीन : कतै मेरो वीर्य भनेर पशुवीर्य पो पर्ने हो कि ?
नवीना : हँ !
नवीना नमज्जाले झस्किई । नवीनले नवीनालाई सम्झाउने प्रयास गर्यो ।
नवीन : त्यसो हुँदैन के । मैले गाइनो डक्टरसँग कुरा गरिसकेको छु । राम्रो परीक्षण गरेर मात्र वीर्यसेचन गरिन्छ ।
हो, यही कुराले नवीनालाई तनाव बढायो । मन न हो, किन मान्दो रहेछ र ? किन ढुक्क हुन सक्थी ऊ ? ऊ घरी डक्टरलाई शङ्का गर्थी, घरी प्राविधिक त्रुटि भयो भन्ने उसलाई लाग्थ्यो । नवीनकै साथीले कैफियत गर्ने पो हो कि भन्ने पनि उसले ठानी । वीर्यसेचन गरेका क्षणदेखि उसको हृदयमा यो पीडा गहिरो किला झैं गडेर बस्यो । यसैले उसलाई सपना पनि बेचैन बनायो ।
त्यस रात उसलाई कस्तो ऐंठन भएको, झन्डै खुस्किथी बिचरी । सपनामा उसलाई प्रसव व्यथा भएछ । उसले सन्तान पाइछ । तर त्यो सन्तान मान्छेको शरीर र बोकाको टाउको भएको । आफ्नो नवजात शिशुको यस्तो हालत देखेर बिचरीलाई कस्तो भयो होला ! न त ऊ आमा हुन पाउँदा खुसी हुन सकी, न आफ्नो त्यस्तो विरुप सन्तानलाई उसले त्याग्न नै सकी । आखिर त्यो उसको सन्तान थियो । सन्तानको मुख मात्र देख्दा आमाको हृदय त्यसै पग्लँदो रहेछ । जस्तै विरुप भए पनि आफ्नो सन्तान आमालाई प्यारो हुँदो रहेछ । उसले आफ्नो सन्तानलाई अमृतरुपी छाती चुसाई अनि बिस्तारै हुर्काउँदै लगी । त्यो सन्तान विद्यालय जाने भयो । विद्यालयका बालबालिका उसलाई देखेर डराउँथे । उसलाई गिल्ला गर्थे । कोही पनि उसका साथी बन्न मान्दैनथे । एक दिन ऊ रूँदै आमाका छेउमा आयो र भन्यो, “आमा, यस्तो बिरुप मलाई जन्मिएकै क्षण मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि । तपाईंलाई पनि त्यति धेरै कष्ट पर्दैनथ्यो ।” आमाको हृदय छोराका यस्ता वचनले चरक्क चिरियो । उसले छोरालाई अँगालो हाली अनि डाँको छाडेर रून थाली । उसले त्यही रूवाइभित्र कैयौं पीडा देखी । उसलाई भीर लडे झैं लाग्यो । आकाश खसे झैं लाग्यो । बाढीले बगाउला झैं लाग्यो । ऊ छोरो बोकेर अज्ञात स्थलतर्फ दौडन थाली । ऊ थकानले लखतरान भई । पूरै शरीर असिनपसिन भयो । ऊ बेचैनीले बर्बराउन थाली । त्यही बर्बराहटले उसको निद्रा बिथोलियो । ऊ लामोलामो सास फेर्दै थिई ।
भिडियो एक्सरे गरेर गर्भपरीक्षण गरेपछि मात्र ऊ यस्तो बेचैनीबाट मुक्त भई ।
सिङ्गो गर्भवती समय उसले एक्लै बिताउनुप¥यो । उसलाई सहयोग गर्ने कोही भएन । आखिर नवीनको वीर्यदानबाट नवीनाले समय पुगेपछि सन्तान जन्माई । नवीनकै सहयोग र सद्भावले ऊ भोलि घर जाने तयारीमा छे ।
आधा रातसम्म नवीना ल्यापटपमा झुम्मिइरही । अनेकौं तीतामीठा स्मरण सिनेमाका दृश्य झैं उसका स्मृतिपटलमा आइरहे । उसलाई आज निदाउन मनै थिएन । बिहानै यात्रामा निस्कनुपर्ने भएकाले उसले सुत्ने तयारी गरी । ल्यापटप थन्क्याई, बिस्तारामा पल्टिई, आँखा चिम्लिई । तर ऊ निदाउन सकिन । ऊ मीठो तन्द्रामा थिई । यत्तिकैमा युवाहरूको एउटा जमात उसका घरअगाडिबाट कतै जाँदै थियो । को रहेछन् ? ऊ हेर्न निस्किई । अचम्म ! झलमल्ल घाम लागेका रहेछन् । “के सारो निदाइएछ !” उसले मनमनै भनी अनि ती युवाहरूलाई नियाली । तिनीहरू उँभैउँभो लागे । तिनीहरू एउटा अग्लो चुचुरामा पुगे । त्यस चुचुरामुनिको जमिन उजाड थियो । त्यो मरूभूमि रहेछ । नवीनाले आँखा दौडाई । मरूभूमिको क्षेत्र बढ्दै गएछ । रुख, बिरूवा केही नभएको, कस्तो उराठलाग्दो मरूभूमि ! नवीना बसेको घर र वरपरको क्षेत्र पनि मरूभूमि देखियो । उसले आँखा दौडाइरही । हरिया बोट कतै देखिएनन् । उसले झन् टाढासम्म आँखा दौडाई । उसलाई लाग्यो– सिङ्गो देश मरूभूमि छ । उता चुचुरामा पुगेका युवाहरू हल्ला गर्न थाले । उफ्रिन थाले । खन्न थाले । जोत्न थाले । उनीहरू कुनै व्यस्त मान्छेले केही गरिरहे झैं सक्रिय देखिन्थे । अरू युवाहरूको ताँती त्यहाँ आउँथ्यो, मिसिन्थ्यो र काममा व्यस्त हुन्थ्यो । जति त्यहाँ आए; तिनीहरूका शरीरबाट पसिना बग्न थाल्यो । पसिना नदी बनेर बग्यो । जताजता मरूभूमि थियो, त्यता त्यता सिँचियो । सारा देश पसिनाले सिँचियो । हेर्दाहेर्दै मरूभूमि कता भाग्यो कता ! सारा संसार हरियाली देखियो । सुन्दर फूल फुले; सर्र बतास चल्यो; हर्र बास्ना आयो । नवीनाले अपार आनन्द महसुस गरी । आनन्दले भरिएका आँखा उसले फेरि युवाहरूको भीडमा दौडाई । भीडमा कोही कोही चिनेका जस्ता देखिए । उसलाई नवीन त्यहीँ छ जस्तो लाग्यो । ऊ नवीन छ कि भनेर नियाल्दै थिई । अलार्म बज्यो । यो त उसको मीठो सपना रहेछ । आज उसलाई सपनाबाट ब्यूँझिएकोमा नरमाइलो लाग्यो । ऊ अर्कापट्टि फर्किएर सुत्न सकिन । किनभने उसले यात्रामा जानु थियो ।